Qorida Warqad - COVID-19 foomamka ka Saarista
Tixgeli: Tani macnaheedu maahan inaadan bixin kiradaada. Waxaad heli doontaa waqti yar si aad uga fogaato ka saaristaada.Ugu dambeyntiina waxaad bixin doontaa dhammaan kirooyinkii hore.
Haddii aad hesho bog maran, waxaad u badan tahay inaad isticmaaleyso biraawsar hore sida Internet Explorer. Si aad u qaadatid wareysiga, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho nooca ugu dambeeya ee Google Chrome. Waxaad ka heli kartaa noocii ugu dambeeyay ee Chrome halkan.
Xasuusnow, ka dib kolka aad warqada diyaarsato, waxa aad u baahan tahay inaad nuqul ka siiso mulkiilaha gurigaaga. Kuwan waa dhowr talo oo ku saabsan habraaca.